Deegaanka Qandala. – Bosaso Times News
admin August 9, 2017 Deegaanka Qandala.2017-08-09T09:01:56+00:00 Puntland, somali News No Comment
Degaanka Qandala waxaa hoos yimaada tuulooyin farabadan ayna ku noolyihiin dad fara badan. Balse deegaanka degmadda Qandala waxuu ka midyahay deegaanada aan dawladda Puntland haba yaraatee wax horumar ah ka samayn tan iyo intii la’asaasay dawlad goboleedka Puntland 1998dii.
Deegaanka Qandala oo balaaran mahaystaan adeegyadii bulshada sida caafimaadkii, waxbarashadii, biyihii, booliiskii iwm. Tuulooyinka iyo deegaanada hoos ku qoran waxay ka midyihin goobaha degmada Qandala ee aan haysan asaasiyaadka bulshada.
Xarago, Ceedadheer, Tuur Masaale, Cakaara, Canjeel, Dhariin, Ceelgaal, Dibir, Geed Xagar, Togweyne, Guriwehele, Galayr, Sheebaab, Dhaadaar, Desaan, Gaadir Oodan, Daramadow, Buuraha Baxayo, Buqo, Miraale, Curaaf iyo kuwa kale oo farabadan.
Magaalada Qandala waxaan ognahay inay ka mid tahay 92 degmo ee dalka Soomaaliya laga aqoon sanyahay kana horeeyey dagaalkii sokeeyo 1991kii. Qandala waa magaalo qadiim ah oo taariikh dheer leh uuna ka dhashay ninka la baxay Calan Gube (Cali Faahiye Geedi) taariikhda buuggaagta Soomaalidana ku xusan.
Waa degmadda ugu waxsoosaarka badan dhinaca kaluumaysiga ayna ku oolaan jirtay wershidii kaluunka ee Qandala. Maanta waa goobta ugu badan ee maraakiibta dawladda Puntland dalka keento ka kaluumaystaan. Maydiga iyo Faleenka ugu badan ayaa laga keenaa kana baxa dhulkeeda.
Waxaan wada ognahay degmadda Qandala inay ahayd degmooyinka Soomaaliya ee haysta dhamaan adeegyadii iyo hantidii bulshada loogu shaqeyn lahaa, wax kasta ay u dhamaystirnaayeen balse maanta dDegmadda nafteeda ma haysato agabkii degmaddu u baahnayd ee maamulka sida saldhigii iyo ciidankii booliiska, ma haysato cisbitaal qalabaysan iyo shaqaale caafimaad, ma haysato xafiisyadii dawladda hoose ee degmadda, xarumihii faleenka lagu safeyn lahaa iwm.
Yaa u maqan degmadda Qandala oo sida ay ku jirto ka saaraya ?
http://www.bosasotimes.com/deegaanka-qandala/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/Qandala2.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/Qandala2-150x150.jpg 2017-08-09T09:01:56+00:00 adminPuntlandsomali Newsmaamul,Puntland,QandalaDegaanka Qandala waxaa hoos yimaada tuulooyin farabadan ayna ku noolyihiin dad fara badan. Balse deegaanka degmadda Qandala waxuu ka midyahay deegaanada aan dawladda Puntland haba yaraatee wax horumar ah ka samayn tan iyo intii la'asaasay dawlad goboleedka Puntland 1998dii. Deegaanka Qandala oo balaaran mahaystaan adeegyadii bulshada sida caafimaadkii, waxbarashadii, biyihii,...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
maamul, Puntland, Qandala
« Qaybta-1.. Macmiil Dulmane Xaqaagii xagee jiraa?
Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo isugu hanjabay Nugliyeer inay isla dhacaan »